Ugandha oo si aan caadi aheyn uga hadashay ciidamada Mareykanka ee Somalia | TOP NEWS
Ugandha oo si aan caadi aheyn uga hadashay ciidamada Mareykanka ee Somalia
By Tifaftiraha Somalida Maanta on April 20, 2017 No Comment
Dowladda dalka Uganda ayaa soo dhaweysay hadalkii ka soo yeeray dowladda Maraykanka ee ahaa in ciidamo ka tirsan kuwa Maraykanka la gayn doono dalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan ciidamada ka soo jeedo dalalka kale ee ku sugan dalka soomaaliya kuwaas oo taageeraya dowladda dhexe ee soomaaliya oo dagaal kula jiro dagaal yahanada Xarakada Al-Shabaab.
Richard Karemire oo ah Afhayeenka ciidamada Uganda ayaa ku tilmamay in ay tahay arin wanaagsan oo muujineyso tilaabo horay uu u qaaday maraykanka si buu yiri uu gacan uga gaysto howlgalka ka socdo dalka Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in arintaan ay dhiiri galin u tahay dowladda Uganda oo ciidamada ugu badn ay ka joogaan soomaliya kuwaas oo wado howlgallada ay ku taageerayaan ciidanka dowladda ee dagaalka kula jiro Xarakada Al-Shabaab.
Hadalka Uganda ayaa ku soo beegmaya xili maraykanka uu ka dhawaajiyay in daraasiin ka tirsan ciidankiisa uu u dirayo Soomaaliya si ay u gacan siiyaan Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Dhinacooda xarakada Al-shabaab ayaa sheegay in ay dagaal la gali doonan ciidamada Maraykanka hadii ay yimaadan Soomaliya, si lamid ah sida ay ula dagaalamaan ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliay
Ugandha oo si aan caadi aheyn uga hadashay ciidamada Mareykanka ee Somalia added by Tifaftiraha Somalida Maanta on April 20, 2017